Fandaharan'asan'ny Mentor Match - International Writing Centers Association
Ny Programan'ny IWCA Mentor Match dia manome fahafahana ho an'ny mpampianatra foibe fanoratana. Ny fandaharana dia mametraka lalao mpanoro hevitra sy mentee, ary avy eo ireo mpivady ireo dia mifanakalo hevitra momba ny tanjon'izy ireo amin'ny fandraisany anjara amin'ny fandaharana, manapa-kevitra ny fomba tsara indrindra hanatrarana ireo tanjona ireo, ary mamaritra ny mason'ny fifandraisan'izy ireo, ao anatin'izany ny fantsom-pifandraisana mety indrindra sy ny faharetan'ny fifandraisana. Satria ny fandaharan'asa dia manao fomba fiasa tsy misy dyadic, ny mpanoro hevitra sy ny mpanoro hevitra dia entanina hifampizara vaovao sy hianatra avy amin'ny tsirairay, ary noho izany, ny roa tonta dia mahazo tombony amin'ny fifandraisan'ny mpanoro hevitra.
Fahamendrehana sy fandaharam-potoana
Afaka manome fanohanana isan-karazany ny mpanoro hevitra sy ny mentee. Mety:
Mifanohitra amin'ny loharanon-karena.
Mifandraisa amin'ny mpiara-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, eo amin'ny firenena ary any amin'ny faritra misy azy.
Mifandraisa amin'ny fampandrosoana matihanina, famerenana ny fifanarahana ary fampiroboroboana.
Manomeza hevitra momba ny fanombanana sy ny vatsim-pianarana.
Manompo amin'ny maha mpanadihady any ivelany anao amin'ny fanombanana ny foibem-panoratana.
Manompoa ho fampiroboroboana.
Manompoa amin'ny maha-seza an'ireo takelaka fihaonambe.
Valio fanontaniana mahaliana.
Manolora hevitra avy any ivelany momba ny toe-javatra.
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny IWCA dia afaka mandray anjara amin'ny Programan'ny IWCA Mentor Match. Ny Fandaharana dia mandeha amin'ny tsingerina roa taona, ary ny tsingerin'ny Mentor Match manaraka dia hanomboka amin'ny Oktobra 2023. Ny IWCA Mentor Match Co-Coordinators dia handefa fanadihadiana amin'ny mpikambana IWCA rehetra amin'ny volana Aogositra 2023 manasa azy ireo handray anjara amin'ny fandaharana. Ny fanadihadiana dia mametraka fanontaniana maromaro momba ny tanjon'ny mpikambana IWCA amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandaharana sy ny andrim-panjakana. Ny Co-Coordinators dia mijery tsara ity fampahalalana ity mba hifanaraka amin'ireo mpanoro hevitra sy mentees izay manana tanjona sy/na andrim-panjakana mitovy. Raha tsy afaka mifanandrify amin'ny mpanoro hevitra na mentee ny Co-Coordinators, dia hanao izay tratry ny heriny izy ireo hitady mpanoro hevitra/mentee izay mety tsara, hamorona vondrona mpanoro hevitra ho an'ny mpandray anjara tsy manan-tsahala, ary/na hampifandray azy ireo amin'ny loharano fanampiny ivom-panoratana.
Raha liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaneraserana amin'ny mpanoro hevitra ivelan'ny tsingerinay maharitra roa taona ianao, dia mifandraisa amin'ny Co-Coordinators (jereo ny fampahafantarana momba ny fifandraisana eto ambany) mba hahafantarana ny fotoana mety.
"Ny naha mpanoro hevitra ahy tamin'ny programa IWCA Mentor Match dia nanampy ahy handinika tsara ny zavatra niainako manokana, nanjary fifandraisana matihanina tamin'ny mpiara-miasa sarobidy amiko, ary namporisika ahy handinika ny fomba hitarihan'ny mpanome torolàlana matihanina amin'ny maha-izy azy ny fifehezana."
“Ho ahy, ny fahafaha-mitarika olon-kafa dia nanana tombony vitsivitsy. Afaka nandoa ny sasany tamin'ireo fanampiana mahafinaritra azoko tsy ara-potoana nandritra ny taona maro aho. Ny fifandraisako sy ny mentee -ko dia mampiroborobo ny sehatry ny fiaraha-mianatra izay ahatsapanay fa tohanana amin'ny asa ataonay. Ny fitazonana io habaka io dia tena zava-dehibe ho antsika izay afaka mahatsapa fa mitoka-monina any amin'ireo toeram-pianarana any an-trano na any amin'ny departemanta silo-ed. ”
Jennifer Daniel, University of Charlotte, Mentor 2018-19
Ny programa IWCA Mentor Match dia manolotra andiana hetsika isan-taona ho an'ny mpanoro hevitra sy mentees. Tsidiho azafady ny Fandaharam-potoanan'ny hetsika IWCA Mentor Match hahitana lisitry ny hetsika ankehitriny.
Raha manana fanontaniana momba ny Programan'ny IWCA Mentor Match ianao dia mifandraisa amin'ny IWCA Mentor Match Co-Coordinators Maureen McBride ao amin'ny mmcbride @ unr.edu ary Molly Rentscher ao amin'ny molly.rentscher @ elmhurst.edu.